जन्मदिनकै दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई लाग्यो झट्का ! सर्वोच्च अदालतले गरिदियो यस्तो फैसला, अब के हुन्छ राजनीति ? – Gazabkonews
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जन्मदिनकै दिन सर्वोच्च अदालतले ओलीले गरेको निर्णय उल्ट्याइदिएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको छ।
आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले पुस ५ को सरकारी निर्णय उल्ट्याउँदै संसद् पुनर्स्थापना गर्ने फैसला सुनाएको हो।
प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो। फैसलामा १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश समेत दिइएको छ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसी, सपना मल्ल प्रधान र विश्वम्भर श्रेष्ठ थिए। पाँचै न्यायाधीशले सर्वसम्मत ऐतिहासिक फैसला सुनाएका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि वैशाख १७ र २७ गते नयाँ निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरेका थिए।
उक्त निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ रिट दर्ता भएका थिए। ती रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा लामो बहस भएको थियो। विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा पुस ८ गतेदेखि सुनुवाइ सुरु भएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीपरिषदमा संसद विघटनको प्रस्ताव लैजानु अघि नै संसदमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लगिएको थियो । तर संसद सचिवालयमा ३ वजे मात्र प्रस्ताव दर्ता गरिएको पाइएको थियो ।
अब नेपालको राजनीतिक निकै पेचिलो मोडमा पुगेको छ । संसद पुनस्र्थापना संगै आन्दोलनरत प्रचण्ड नेपाल समुहमा खुसीयाली छाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद पुनस्र्थापना भए आन्दोलनमा जाने चेतावनी विराटनगरमा आमसभाका क्रममा गरेका थिए ।